February 14, 2020 - MM Live News
အသကျ(၈၈)နှဈ ကြောငျးဆရာမကွီး၏ နအေိမျ မီးလောငျးရာ စုဆောငျးထားငှေ(၄၇)သိနျး မီးလောငျပကျြစီး
အသက်(၈၈)နှစ်အရွယ်ရှိ ကျောင်းဆရာမကြီး၏ နေအိမ် မီးလောင်းရာ စုဆောင်းထားငွေ(၄၇)သိန်း မီးလောင်ပျက်စီး ရန်ကုန်၊ဖေဖော်ဝါရီ-၁၄ မြင်းခြံမြို့၌ နေထိုင်သည့် အသက်(၈၈)နှစ်အရွယ်ရှိ ကျောင်းဆရာမကြီး၏ နေအိမ် မီးလောင်ခံရ၍ စုဆောင်းထားငွေ(၄၇)သိန်း မီးလောင်ပျက်စီးသွားကြောင်း ဆရာမကြီး၏ တပည့်ဖြစ်သူ ဦးချင်းကိုကိုကပြောပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်မှ ဖေဖော်ဝါရီ(၁၃)ရက်နေ့ ညနေ(၅)နာရီအချိန်ခန့်၌ မြင်းခြံမြို့၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၌ မီးလောင်မှုဖြစ်ပေါ်ရာ ဆရာမကြီးနေထိုင်သည့် နေအိမ်ကို မီးကူးဆက် လောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။မီလောင်နေချိန်၌ အနီးရှိ ဘော်ဒါမှ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများမှ ကူညီမှုကြောင့် အသက်ရှင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ မီးလောင်ရာရပ်ကွက်ကို မီးသတ်မှ မီးငြိမ်းသတ်ပြီးနောက် ဆရာမကြီးနေထိုင်သည့် ကုတင်အောက်ရှိ သေတ္တာအတွင်း၌ ထည့်ထားသည့် မီးလောင်သည့် ငွေ(၄၇)သိန်းကို တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “ဆရာမကြီးအိပ်တဲ့ကုတင်အောက်မှာရှိတဲ့သေတ္တာထဲထည့်ထားတာ။သူ့အစည်းနဲ့သူပေါ့။ဆေးကုဖို့၊လှူရေး၊နာ ရေးအတွက် သူ့အစည်းနဲ့သူထားတာ။အခုက ငွေစက္ကူအထုပ်ရဲ့ အလယ်ကနေလောင်တော့ နံပါတ်တွေပါ ပါကုန်တယ်။ဆရာမကြီးက တစ်ယောက်ထဲနေတာ။အခု ဆရာမကြီးရဲ တပည့်တွေက ကူညီပေးနေတယ်”ဟု ကိုချင်းချင်းက […]
စဈကိုငျး တံတားပျေါမှာ အလညျလောကျ မီးရထားတဈစငျး မီးလောငျနေ …
စစ်ကိုင်း တံတားပေါ်မှာ အလည်လောက် မီးရထားတစ်စင်း မီးလောင်နေ … Breaking News … စစ်ကိုင်းတံတား(အင်းဝတံတား)ပေါ်မှာ အလည်လောက်မီးရထားတစ်စင်း မီးလောင်နေသည်ဟု ကနဦးသတင်းသိရသည် ။ စစ်ကိုင်းတံတားဟောင်းရထားလမ်း တံတားပေါ်က ရထားမီရထားတောင်လောင်တယ်ဆိုတော့ မီးကပ်ဆိုက်တယ်ခေါ်မလား? credit zin moe unicode version Breaking News … စဈကိုငျး တံတားပျေါမှာ အလညျလောကျ မီးရထားတဈစငျး မီးလောငျနေ … စဈကိုငျးတံတား(အငျးဝတံတား)ပျေါမှာ အလညျလောကျမီးရထားတဈစငျး မီးလောငျနသေညျဟု ကနဦးသတငျးသိရသညျ ။ စဈကိုငျးတံတားဟောငျးရထားလမျး တံတားပျေါက ရထားမီရထားတောငျလောငျတယျဆိုတော့ မီးကပျဆိုကျတယျချေါမလား? credit zin moe
မော်လမြိုင် ကမ်းနားလမ်း သံလွင်မြစ်အတွင်း မောင်နှမများရေထဲမှ ခေါ်နေသည်ဟုဆိုကာ မြစ်ထဲ အတင်းခုန်ချသည့် မိန်းကလေးအား ကယ်ဆယ်၍ မိသားစုထံအပ်နှံ 14.2.2020 နံနက်(10:00)ခန့်က မော်လမြိုင်မြို့ ဖက်တန်းရပ် နတ်မှော်ဆိပ်ခံ ဘောတံတားတွင် အသက်(၁၉)နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး တစ်ဦးမှ မြစ်ထဲမှ ဆွေမျိုးမောင်နှမများ ခေါ်နေသည်ဟုဆိုကာ ခုန်ချ နေကြောင်း အကူအညီတောင်းခံလာ၍ မော်လမြိုင် Rescue အဖွဲ့မှ ….. သတင်းရရခြင်း ထွက်ခွာ၍ အမျိုးသမီးငယ်အား ထိန်းသိမ်းပေးကာ (ပူးတာလား စိတ်ဂယောင်ခြောက်ခြား ဖြစ်သည်လားတော့မသိပါ)….. သံလွင်မြစ်ထဲသို့သာ ခုန်းဆင်းရန် အတင်းရုန်းကန်နေသည့် မိန်းကလေးအား ရုံးသို့ထိန်းချုပ် ချော့ခေါ်လာ၍ မြစိမ်းတောင် ဆရာတော်အား ပရိတ်ရေ ပဌာန်းရေများတိုက်စေပြီး…. ဂယောင်ခြောက်ခြား ဖြစ်နေသည့်စိတ်အား တည်ငြိမ်အောင် ချော့မော့ ပြောဆိုပြီးနောက် မိသားစုဝင်များအားဆက်သွယ်ကာ မိဘနေအိမ်သို့ အရောက် ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများနှင့်လဲ […]